बढ्दै सुन्दरता मोह «
बढ्दै सुन्दरता मोह
प्रकाशित मिति : माघ २३, २०७६ बिहीबार
हरेक मानिस सुन्दर बन्न चाहान्छ । मानिसलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउँन छालाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । विशेष गरि अनुहार, घाँटी, हात, खुट्टाको छाला बाहिर देखिने हुँदा त्यो मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु छालाको सुन्दरतालाई लिएर संवेदनशील हुन्छन् । बाहिरी सुन्दरतालाई आकर्षण बनाउने उद्देश्यले झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित ‘हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि’ अहिले अधिकांशको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । प्रालिमा सेवा लिनका लागि जिल्ला साथै जिल्ला बाहिरबाट आउने मानिसको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
दुई महिना अघिदेखि बिर्तामोडबाट सेवा सुरु गरेको हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालिमा उच्च स्तरीय प्रविधियुक्त सौन्दर्य ल्याब, छालाको परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसारका सौन्दर्य सामान उपलब्ध गराईन्छ । अनुहारमा आएको डन्डीफोरले हैरानी खेपिरहेकी काठमाडौँकी निशु तिम्सिनाले सोही प्रालिबाट सेवा लिइरहेकी छिन् । सोही समस्याबाट पीडित निशुकी दिदी मुना श्रेष्ठले हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालिमा उपचार गराएसँगै सुधार आएपछि बहिनी निशु पनि काठमाडौँबाट उपचारका लागि निरन्तर आउने गरेकी छन् । धेरै हस्पिटल धाउँदासमेत निको नभएको डन्डीफोर प्रालिमा आएसँगै सुधार भएको श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
इलामको माइनगरपालिका –५ की १५ बर्षीया आस्था फागो सोराइसिसको समस्याबाट पीडित छिन् । फागोको कपाल झर्ने समस्या छ । केही वर्ष अघि टाउकोमा विभिन्न किसिमका खटिरा निस्केपछि कपाल झर्ने समस्या सुरु भएको उनले सुनाइन् । आस्थाका बुबा असलबाहुर फागोले गत कात्तिकमा आस्थालाई लिएर हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि आएका थिए । टाउकोमा भएको आस्थाको खटिरा पूर्णरुपमा निको भएसँगै कपाल पलाउन सुरु गरेको गत मंगलबार प्रालिमा भेटिएकी आस्थाले सुनाइन् । ‘पहिले जसरी नै कपाल पलाउँछ होला भन्ने आश हराएको थियो’ फागोले भनिन्, ‘प्रालिको सेवाप्रति सुन्तष्ट छु ।’
प्रालिले फरक तवरले सेवा दिइरहेको प्रालिका सञ्चालक डा. मनुराम चिमरीयाले बताए । पूर्वमा नै छाला ताथ सौन्दर्यमा आफूले प्रदान गरेको सेवा सबैभन्दा प्रविधियुक्त रहेको दाबी चिमरीया गर्छन् । एचडीमा छालाका सबै किसिमका समस्याको समधान हुनुका साथै ट्याटु तथा जन्मदाग हटाइने सञ्चालक चिमरीया बताउँछन् । ‘हामी चाहे अनुसारको आकर्षक शरीर पनि बनाउन सक्छौँ’ उनले भने, ‘ओठ, आँखा, चिउडो, नाक, ब्रेष्ट, हिपको आकार मिलाउन सकिने छ ।’ साथै पेट तथा शरीरको बोसोसमेत घटाउन मिल्ने चिमरीयाले बताए ।
पाँच करोड रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको ‘हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि’ले कपाल प्रत्यारोपण पनि गर्दै आएको छ । पछिल्लोसमय कपाल प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको प्रालिको तथ्यांकले देखाउँछ । आफ्नै कपाल उखालेर आफैँले लगाउनसमेत मिल्ने प्रविधि रहेको उनी बताउँछन् । सौन्दर्य र कपालसँग समस्या भएका मानिस बढी आउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको पुस्तालाई शरीर आकर्षक भएन भने तनावमा उत्पन्न हुन्छ’ चिमरीयाले भने, ‘यस विषयलाई मनन् गरेर हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’ सौन्दर्य र छालासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरसफाइमा समेत विषेष ध्यान दिनु पर्ने डा. चिमरीयाले बताए । प्रालिले छाला, सौन्दर्य, हर्मोन, फिजिसिजन विशेषज्ञको सेवा हरेक दिन प्रधान गर्दै आइरहेको छ ।